Wararkii Ugu Dambeeyay Khasaaraha Ka Dhashay Weerarka Hoteel SYL. – Bogga Calamada.com
Wararkii Ugu Dambeeyay Khasaaraha Ka Dhashay Weerarka Hoteel SYL.
August 30, 2016 4:30 pm Views: 17
Faafaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa camaliyad Istish-haadi ah oo maanta lagu weeraray Hotelka SYL ee magaalada Muqdisho oo ku yaalla meel u dhow madaxtooyada kooxda ridada Soomaaliya.
ugu yaraan 30 ruux oo u badan ilaalada xarunta madaxtooyada ayaa lagu dilay weerarka, halka sidoo kale lagu dhaawacay mas’uuliyiin ka tirsan murtadiinta oo isugu jira waziiro, Xildhibaano iyo Saraakiil ciidan.
Afhayeenka ciidanka mujaahidiinta Sheykh Cabdi Casiis Abuu Muscab ayaa Idaacada Andalus u sheegay in halyeey Istish-haadi ah oo hogaaminayey gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa uu beegsaday Hotelka xilli halkaas ay joogeen mas’uuliyiin ka tirsan murtadiinta.
“Allaah fadligii, waxaa ciidamada Mujaahidiinta u suuragashay in ay camaliyad Istish-haadi ah ku beegsadaan Hotelka SYL oo ka mid ah xarumaha hooyga u ah murtadiinta xilli halkaas uu ka socday kulan. waxaan halkaas ku dilnay cadow fara badan oo isugu jira madax iyo ciidamo intaba” ayuu yiri Abuu Muscab.
Afhayeenka ayaa sidoo kale noo sheegay in qaraxa uu burburiyey qeyb ka mid ah dhismaha Hotelka, Islamarkaana goobta lagu dilay 30 ka mid ah murtadiinta oo u badnaa Ilaalada madaxtooyada iyo kuwa Hotelka.
Wararku waxay sidoo kale sheegayaa in qaraxa uu burburiyey qeybo ka mid ah dhismaha xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, Islamarkaana halkaas uu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur intaba.
Hotelka waxaa ka socday kulan looga hadlayey amniga oo ay ka soo qeybgaleen waziiro, Xildhibaano, Saraakiil iyo saxafiyiin sida ay xaqiijiyeen mas’uuliyiin ka tirsan kooxda ridada Soomaaliya.
Dadka ku dhaawacmay weerarka waxaa ka mid ah Waziirka warfaafinta ee kooxda ridada Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, Waziirka Dakadaha Nuur Faarax, iyo Xildhibaan Cabdalla Boos kuwaas oo ku sugnaa hotelka la weeraray. Waxaa sidoo kale warar aanan la xaqiijin ay sheegayaan in sidoo kale uu dhaawacmay Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow oo ka tirsan golaha dhawaaqiida ee kooxda ridada Soomaaliya.
Qaraxa maanta gilgilay magaalada Muqdisho ayaa lagu tilmaamay midkii ugu xooganaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu dhacay qaraxii midkan ka horeeyey ee lagu beegsaday isla Hotelkaasi bilooyin ka hor.
Xigasho Telegramka Radioandalus.
Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka 04-05-1439 Hijri.
Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 03-05-1439 Hijri.
Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 03-05-1439 Hijri
Waa Sidee Xaaladda Bulshada shareecada Islaamka Lagu Maamulo Ee Gobalka Baay Ku Dhaqan?